I-Pocophone F1 ifumana iNkqubo yeNdawo yoBusuku kunye nenkxaso yokurekhoda kwi-960 fps | I-Androidsis
Okokugqibela, uhlaziyo ekudala lulindelwe lukhutshwa kwifayile ye- Xiaomi Pocophone F1. Emva kokufumana inkxaso ye-TWRP, i-brand yokuqala ye-Xiaomi yokuqala efikelelekayo ifumana uhlaziyo olutsha oluzinzileyo lwe MIUI 10 ezisa inombolo yenguqulo kwi-v10.2.2.0.
Olu hlaziyo lwalulindelwe kakhulu kuba izisa ukuphuculwa okubalulekileyo kwikhamera. Eyokuqala yinkxaso yokurekhodwa okucothayo kwevidiyo kwii-960 fps, ukujoyina iindlela ze-fps ezili-120 kunye ne-240 ezazisele zikho, ngelixa eyokugqibela inguye Imozulu yasebusuku.
Ngelixa umsebenzi wokuqala ukonyusa iividiyo ezihamba kancinci, owesibini uya kunciphisa inani lengxolo yedijithali ebumnyameni kwaye uphucule ukubonakaliswa ngokubopha iifoto ezisi-8 ezinamanqanaba okuveza angafaniyo. Inqaku elitsha ngokupheleleyo elingazange lavavanywa kwiXiaomi Pocophone F1, ke kuya kuba ngumdla ukufumanisa ukuba isebenza njani. Ngaphandle kwamathandabuzo, iziphumo zeefoto ezifakiweyo ziya kuphucula kakhulu. (Fumanisa: [APK] Uyikhuphelela njani kwaye uyifaka njani ikhamera yePixel 3 kwiPocophone F1 kunye neXiaomi Mi 8)
Uhlaziyo lubandakanya ifayile ye- Isiqwenga sokhuselo kwinyanga yoMnga, ayisiyiyo eyakutshanje, kodwa iseyinto entle yesixhobo esifikelelekayo. Ngaphambili, uXiaomi ukwacacisile ukuba ifowuni izakufumana inkxaso yokurekhodwa kwevidiyo ye-4K nge-60fps, kodwa imowudi ayifikanga nolu hlaziyo, ke abasebenzisi baya kunyanzelwa ukuba balinde elandelayo, ekufuneka iqale ukukhutshwa ngoFebruwari. Uhlaziyo lunobunzima be-311 MB kwaye lukhutshwa nge-OTA.
Ukuba ayifikeleli kwisixhobo sakho, hlisa umoya. Khumbula ukuba ngamanye amaxesha kusasazwa ngokuthe ngcembe yimimandla, amanani emodeli, kunye nezinye izinto. Ungahlala ujonga icandelo loHlaziyo lweNkqubo kwifowuni ukuyifumana ngokukhawuleza, xa ifika.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Pocophone F1 ifumana iNdlela yoBume boBusuku kunye nenkxaso yokurekhoda kwii-960 fps
Imidlalo emi-5 yasimahla ye-Android ongayiphosiyo